Geedi socodka Kovid-19 iyo kadib warshadaha difaaca aduunka iyo turkiga | RayHaber | raillynews
HomeGUUDGeedi socodka Kovid-19 iyo ka dib Warshadaha Difaaca ee aduunka iyo Turkiga
23 / 05 / 2020 GUUD, Headline, ISDIFAACA, TURKEY
Kovid iyo kadib howsha Turkiga iyo aduunka ee dhanka warshadaha difaaca
Wasiirka Warshadaha Difaaca Madaxweynaha. Dr. Ismail Demir, matoorrada farsamada difaaca STM iyo ganacsiga AŞ waxay u maleynayaan inay qabanqaabiyeen qabanqaabinta barnaamijka fiidiyowga ee STM Think Tech, "howsha Kovid-19 iyo kadib markii warshadaha difaaca ee aduunka iyo turkiga" ay kaqeybgaleen golaha.
Madaxweyne Prof. Dr. İsmail Demir wuxuu sheegay in howlo aan caadi aheyn ay adduunka ku soo arkeen cudurka faafa, dhaqaalihii wadanku uu saameeyay xaaladan, teknoolojiyaddii wax soo saarka ayaa hoos u dhacday, laakiin mashruucyada istiraatiijiyadeed ee warshadaha difaaca, talaabooyin gaar ah ayaa la qaatay shaqaduna way sii socotaa. Intaa waxaa sii dheer, wuxuu caddeeyay in shirkadaha ka shaqeeya Warshadaha Difaaca ay muujiyeen tusaalooyin wanaagsan oo ku saabsan adeegsiga teknolojiyadda dhowrka ah muddadan oo uu xusay shaqooyinka laga qabtay ASELSAN.
Isagoo carrabka ku adkeeyay in imtixaan guul ah laga gaadhay hawshan, Madaxweyne Prof. Dr. Wuxuu sharraxay in howlihii ay ka midka yihiin birta, maaskaro, xirmada baarista iyo soosaarka jeermiska lagu dardar galiyo caafimaadka.
Isagoo hoosta ka xariiqay inay mashaariicdu sii socdaan, ayuu yiri: “Waxaa laga yaabaa inay dib u dhacdo dib-u-dhigidda waxoogaa horumar ah, laakiin ma fileynno inay tan ka muuqan doonto bartilmaameedyada sannadka dhammaadkiisa illaa xad weyn. Laga yaabee in shirkad kasta ay ku jiri karto boqolkiiba boqol. Wax dhibaato ah oo ku saabsan soo-rogidda annagu kuma lihin. Hawshani waxay door wanaagsan ka qaadan doontaa mowqifka Turkiga, wuxuuna siiyay inay taageerto muuqaalka wadanka mudada dheer ee aan filayno saameynta wanaagsan ee dhoofinta. ”
Madaxweyne Prof. Dr. Ismacil Demir, oo ah soo saaraha keliye ee Turkiga ah ee aan awood u laheyn sida ku hawlan warshadaha difaaca ayaa soo jiidatay dareenka meelaha kale, adeegsaday weedho soo socda:
Halkan, kartida farsamada, waxsoosaarka garoonka, awooda suuqgeynta iyo maareynta aragtida ayaa dhamaan ah halbeeg. Iyada oo tan la ixtiraamayo Turkiga, ayaa inbadan bilaabay in ay ka soo muuqdaan suuqa adduunka oo dhinaca kale ay yihiin ciyaartoy buuxiya booska Shiinaha. Waxaan suuqa u gali doonnaa sidii waddan xaqiijin ah oo la xaqiijiyey, dareenkan, waa macquul in la beddelo dalal badan oo dhoofinta iyo dhaqanka ah oo ay ka mid tahay Shiinaha.
Kordhinta dhoofinta alaabada loo dhoofiyo dalka Turkiga xilligan Madaxweynaha wuxuu muujiyey rajada ah in garaafka qalooca laga qabto wax badan Prof. Dr. Demir wuxuu sheegay inuu rumeysan yahay inuusan u soo bixi doonin sidii uu u burburin lahaa cudurka faafa ee dalka, laakiin waddan ahaan u diyaarshay inuu qaado tallaabooyin lagu guuleysto howsha.
"Ma jiraan wax la tirtiray ama dib loogu dhigay Mashaariicda"
Madaxweyne Prof. Dr. İsmail Demir wuxuu cadeeyay in aysan jirin baajinta ama dib u dhigista mashruucyada qandaraaska, iyo in daraasadaha mudnaanta la siinayo ee mashaariicda ay noqon karaan sida xawaareynta ama hoos u dhigida alaabada qaarkood, iyo in ay ka feejignaadaan alaabada istiraatiijiyadeed.
Wuxuu hoosta ka xariiqay in amniga dalka uu yahay qaab dhismeed badan leh, isla markaana dunidu ay tan ku fahmeyso faafa.
Madaxweyne Prof. Dr. İsmail Demir ayaa sidoo kale khudbaddiisa ku xusay mashruuca F35 wuxuuna sheegay inaysan jirin xog cad oo ku saabsan waxa ka socda dhinaca Mareykanka.
Wuxuu soo jiitay xaqiiqda ah in Turkiga uu shuraako la yahay mashruucan. "Dhaqdhaqaaqyada aan caadiga ahayn ee la xiriira iskaashigu ma laha aasaas sharci mana aha wax macquul ah. Iyada oo la tixgalinayo guud ahaan qaab dhismeedka iskaashiga iyo iskaashatada, ma jiro wax aasaas ah oo ku saabsan in tallaabadaas laga dhigo S400. Lug ma ahan in la qaato go’aamada quseeya diyaaradda in la aado Turkiga, laakiin tan kale waa arin aan laga soo bixin wax shaqo ah oo ay qabato. In kasta oo aan si isdaba joog ah ula hadalnay la-hawlgalayaashayada oo aan helin jawaab macquul ah, haddana hawshu way sii wadday. Isaga oo ku hadlaya ereyadiisa, hawshan, mashruucan waxaa la sheegay inuu ku kacay kharash dheeri ah ugu yaraan $ 500-600 milyan. Mar labaad, sida ku xusan xisaabintayada, waxaan aragnaa inay jiri doonaan kharash dheeraad ah ugu yaraan $ 8-10 milyan diyaarad kasta. ”
Madaxweyne Prof. Dr. Ismaaciil Demir, isagoo farta ku fiiqaya waraaqo ku saabsan F35 inay farriin cad u yihiin Turkiga wuxuu sheegay in Turkigu ku dhejin doono saxiixiisa muujinaya inuu yahay saaxiib daacad u ah howshan. Turkiga iyo la-hawlgalayaasheeda barnaamijka shaqada waa la joogsan doonaa inta howsha Turkiga la siinayo taariikhda ay ku dhaceyso fekerka ku aaddan sharraxaya inay ka soo bixi doonaan waajibaadka saaran ee joogtada ah ee ay ku sugan yihiin ilerliyormuşça laga helay qiimeynta soo socota:
Waxaan aragnaa faa iidada maanta. Maarso 2020 waxay ahayd waqtiga kama dambaysta ah, taariikhda ayaa dhaaftay shirkadahayaguna sii wadaan wax soo saarka. Mar haddii 'aan tuuray, waxaan gooyay xadhigga hadda waan ka saarayaa Turkiga' maahan wax fudud. Waxay qaateen go'aankan, in kasta oo xaqiiqda ah in saraakiisha Mareykanka ay sidoo kale kahadleen waxqabadka shirkadda, tayada waxsoosaarka, kharashaadka iyo waqtiyada gaarsiinta deegaanno badan oo kala duwan oo ku saabsan ku-biirinta wershadaha Turkiga iskaashigan. Waxaan aragnaa in helitaanka wax soo saarayaasheena karti leh halkii kuwa cusub aysan ahayn wax fudud. Waxaan sii wadnaa iskaashiga wax soo saarkeena. Waxaad isku dayday inaad dibedda noo saarto, aanaan u nasano, maxaa yeelay waxaan joojineynaa wax soo saarkeenna, kuma tagi doonno. Sababtoo ah haddii uu jiro heshiis shuraako ah, haddii bixitaan la sameeyo, waxaan aaminsanahay in wada-hawlgalayaashu bilaabeen inay si daacadnimo leh ku sii wadaan. Tani waa mowqifkeenna qaran ahaan iyo dowlad ahaanba. Waxaan aaminsanahay in mowqifkani sax yahay. ”
Warshad Tiknoolajiyadeed oo xoog leh oo Czech ah ayaa lagu soo bandhigayaa Eurasia Rail 2014
Sivas Industry waxay Horumarin doontaa Maalgashiyada Tareenka
Warshadaha Bursa waa in ay ku xiran yihiin badda iyadoo tareenka